Hambalyo dugsiga Alnajax | allsanaag
Hambalyo dugsiga Alnajax
Ardada Alnajax wuxuu ku sheegay argagixiso, waalidkii caruurta dhalayna wuxuu ku sheegay Dayuusiin isaga oo la xiriirinaya inay la beel yihiin Galgala. Maannta ardadii lagu sheegay argagixisada iyo inay amni xumo ka wadaan degmada Boosaaso ee gobolka Bari waxay galeen natiijada Kowaad ee dugsiyada sare ee Puntland. Shanta arday ee ugu saraysay ardadii ka baxday dugsiyada sare ee Puntland sanadkan sadex ka mid waxay ka soo baxeen degsiga Alnajax. Tobonka arday ee dugsiyaada sare ee Puntland ugu dhibco badnaa shan ka mid ah waxay ka soo baxeen dugsiga Alnajax
Hoos ka degayso Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Cabdixakiin Yusuf Xuseen, oo Caruurtan heerka sare ka gashay waxbarashada duigsiyada sare ee Puntland ku leh ku leh Waa Cadawga Puntland Waalidkoodna waa Dayuusyo Caruurtoodana waa Wacalo.
Taliyaha oo horay shaaha uga karin jiray dekedda Boosaaso ayaan aqoon waxbarsho lahayn shahaado dugsi dhexna haysan
Ardadii, waaldidkii iyo maamulkii dugsiga sare ee Alnijaax ww lagu aflagaadeeyey dedaalka ay wadaan , waxay Soomaali iyo caalamka u soo bandhigeen inaanay ahayn argagixiso iyo dayuusiin . Hdaba taliyaha ku fashilmay amniga gobolka bari, oo ku guul daraystay inuu ka hor tago xasuuqii Afurur, Galgala, dilalka magaalada Boosaaso ka dhaca soo isagu maaha Dayuus IDibjir xilka loogu dhiibay qabyaalada, xilkana ku haya qabyaalada. waxaana markhaanti ka ah inuu qabyaaladda xilka ku hayo markii ay is qabteen duqii hore ee magaalada Boosaao oo ka soo jeeday beesha Dishiishe in xilkii laga qaaday duqii magaalada ilaa maantana aan mgaalada Boosaaso lahayn gole degaan iyo duq magaalo. Taasna waxa u sabab taliyaha qayba booliiska gobolka Bari oo ka sareeya sharciga
← Alshabaab la ogaa oo xil loo dhiibay Ilma Faroole Abtigood ayaa ka daran →